FIFA e ikikere ha World Cup ndorondoro na kọmputa egwuregwu ụlọ ọrụ fọrọ nke nta ka orú arọ na iri, na o nwere ka ga-ekwu, mgbe mgbe na obere ihe ịga nke ọma, ọ dịkarịa ala na okwu nke na-ezi egwuregwu si na ya, m n'aka na ha niile jisiri ka mkpa ego n'ezie.
Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ n'ezie ndị ukwu n'etiti ndị efu, ka na-agba ọsọ ala nke kasị mma nke egwuregwu ndị.
Dabere n'elu FIFA 14 egwuregwu engine na nkwalite maka dribbling, na-agafe ziri ezi na a reworking nke 'mbụ - aka' usoro ihe nsiridi, dị ka ya 2010 nna nna, egwuregwu a na-agụnye a zuru na-eru eru mkpọsa usoro a na-akpọ Okporo Ụzọ na FIFA World Cup, ebe e nwere nta online version, Road ka Rio de Janeiro, nke na-enye ohere maka 12 Player ka mpi a ndorondoro na-egwu na World Cup stadiums.
Gameplay maara ihe onye a bụ nnọọ ihe na-FIFA ebu dị ka anyị maara ugbu a ya, nkwalite mere na mbụ eme ka a dị iche, karịsịa ka nke kasị mma Player na elu nkà Fim. Graphically ọ bụ ọkaibe, na-egosi na ịrịba ọganihu si aga version nke egwuregwu.
N'ozuzu, ọ bụ mma na-ekwu na ndị ọhụrụ FIFA World Cup egwuregwu n'ezie bụ ya kasị ukwuu.
Eleghị anya kasị zuru ezu ịme anwansị nke a ụwa cup mgbe etinye n'ime a egwuregwu ruo mgbe ọhụrụ mbipụta. 199 mba dị iche iche ịhọrọ site na-site a na-eru eru mkpọsa n'ihu gị ọbụna-esi finals onwe ha!
Ndịna-emeputa nwere ike karịrị taa ma e ọkaibe n'oge ahụ, na ụda nwere, m ntị m, ka e karịrị. Ojoo a oke nke egwu na eme site na mammoth-eru eru mkpọsa ma ọ bụ ịmalite na finals dị ka otu n'ime 32 ìgwè na n'ezie na ruru eru, gameplay bụ dị ka ị ga-atụ anya n'aka a egwuregwu dabeere FIFA 2010, nkọ, na-ekere òkè na fun. Tinye na online play ma na ị nwere a-eto eto.
A Nwere Obi Ike mgbalị na gụnyere ihe dum 2 afọ mpi n'ime otu egwuregwu, ọ n'ụzọ dị ukwuu rụpụtara ezi ihe. M nwere ike na-ajụ otú ọtụtụ ndị emeela San Marino site ihe dum na-eru eru mgbasa ozi na ma eleghị anya site na finals, ma nhọrọ bụ n'ebe onye ọ bụla na-achọ na-agbalị ka m maa.
Nke abụọ 3D egwuregwu, onye a bụ onye ọzọ dabeere na FIFA egwuregwu nke oge, ọ bụ ezie ebe a na ọ na-anọchi anya a ụdị gara ọkara ụlọ n'etiti FIFA 2002 na FIFA 2003, nke na-eme n'ihi na-akpali gameplay na bụ nnọọ ihe a siri ike egwuregwu na-ukwu. Mbụ World Cup egwuregwu na-enwe recognizable atụ nke ezi footballers (ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na ihe ịga nke ọma karịa ndị ọzọ o nwere ka ga-ekwu) na bụkwa onye mbụ World Cup egwuregwu na-enwe na Xbox.
Egwuregwu guzo n'ihi na ya gameplay n'ezie, ọ bụ ihe kasị mma e nwere n'oge ahụ, ike Ogwe-eme ka a nkà dabeere egwuregwu na refereeing nwere ike tụgharịa ruo etoju na-eme ka ọ incredibly siri ike.
Ọzọ egwuregwu dabeere na FIFA egwuregwu nke oge, World Cup 98 bụ nke mbụ ezigbo mgbalị iji simulate n'ezie football, otú ọ na-egwuri si ebe a na ata ụwa, na a ụwa cup egwuregwu kọmputa, ọ bụkwa onye mbụ mgbalị na e sere ezi otu ngwa iwu maka Player na, nyere onyeōzi eru nke oge, bụ site na nnukwu ịga nke ọma.
Ọ bụ ụwa nke mbụ cup egwuregwu na-enwe 3D ịke ndịna-emeputa, niile gara aga nsụgharị nke ụwa cup egwuregwu ndị 2D na anya si a n'elu ala anya. Site taa ụkpụrụ ndịna-emeputa bụ ndị ogbenye na ya niile anya nke ukwuu dere n'ezie, Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ọ kọrọ niile nhọrọ nke ya ọhụrụ anụ ma ọ bụ nwunye anyị kwuru n'elu, na gameplay ebe a bụ mara mma na ya mfe.
Ọ bụrụ na anyị na-eme ihe n'eziokwu, egwuregwu ndị a na-ama na-na-na mkpa na ala ebe àgwà bụ nchegbu, i nwere ike ịsị a top ise e ndinyanade mbịne ya a bit ma anyị ga-anọgidesi ike o sina.
World Cup '94 adade ke a anya nnụnụ echiche, ya anya mara mma na okwu nke oge ọ na-emepụta, bụ menus na ndị ọzọ na ngosi na-nnọọ slickly mere, na egwuregwu bụ dị na multiple formats.
Nke a bụ nke ikpeazụ ụwa cup egwuregwu na-eme ka ihe anya na a Sega usoro, Megadrive, na kwa ikpeazụ onye-egosi na Amiga. Erule oge ọzọ World Cup akpọrepu gburugburu PlayStation na Nintendo 64 agbaala n'elu Ịgba Cha Cha odida obodo. Ọ bụkwa mbụ windows ala ụwa cup egwuregwu, ndị gara aga nsụgharị ịbụ MS-DOS egwuregwu.
Gameplay maara ihe ọ nwere ụfọdụ akara mbipụta, ma bụ nnọọ ndị kasị mma nke 2D nsụgharị nke World Cup egwuregwu na na e mere.
N'ozuzu a mbuaha ụyọkọ, na nke ahụ bụ ihe kasị mma n'ime ha. Ma na-enwu ọkụ adị, na mgbe e mesịrị egwuregwu n'ezie ibi ndụ dị ka ntụrụndụ uru nke World Cup onwe ya.
> Resource> Game> The Top 5 FIFA World Cup Video Games